Adora & etc.: February 2014
Feb - Season of Love
ပြီးခဲ့တဲ့ စနေနေ့၊ ရုံးအားရက်။ ထတဲ့အချိန်က နေ့လည်၁၂နာရီ။ မျက်နှာသစ်၊ကိုယ်လက်သန့်စင် ဆေးကြော မနက်စာကော်ဖီလေးသောက်ပြီး အိမ်ကသူငယ်ချင်းတွေနဲ့ လေပေါ, ပြီးအချိန်ကြည့်တော့ လားလား နေ့လည် ၁နာရီထိုးပြီးလို့ တော်တော်တောင်ကျော်နေပြီ။ နာရီကြည့် တော့မှ ဆာလာတဲ့ဗိုက်ကိုဖြည့်ဖို့ နီးစပ်ရာ အိမ်နားက mallကိုပြေးတုန်း ဖုံးက Viber ကနေ အသံမြည်လာတယ်။ ဖုံးထုတ်ကြည့်လိုက်တော့ ရန်ကုန်က အမေ့ဆီကနေလှမ်းပို့လိုက်တဲ့ Viber messages တွေ။
"Mom sent you an image"
"အင်း..မာမီတော့ ဒီနေ့ဘာဟင်းကောင်းကြွေးကောင်းတွေချက်နေပြီလဲမသိ။ ဓာတ်ပုံတွေပို့နေပြီ။ ဒီမှာ ဗိုက်ဆာနေပါတယ်ဆိုမှ။"
ကျမတို့သားအမိက တယောက်တယောက်ကြိုက်တတ်တဲ့ ဟင်းတွေချက်တိုင်း တယောက်နေ့တယောက် ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးကြွားနေကြ။
"ဒီနေ့ အိမ်မှာ မာမီရော၊ သမီးရောကြိုက်တဲ့ ရခိုင်မုန့်တီချက်တယ်။ အရမ်းကောင်းလွန်းလို့ ကုန်တောင်ကုန်တော့မယ်။"
"မာမီတို့ ဒီနေ့ ငါးဖယ်ဟင်းချက်စားတယ်။ ဒီမှာကြည့်။ မြင်တာနဲ့ သွားရေကြသွားပြီမှတ်လား။ သမီးလေးကို သတိရတယ်" စသဖြင့်ပေါ့လေ။
Message တွေကိုဖွင့်ပြီးကြည့်တော့ "ဟင် ဟင်းပုံတွေလဲမဟုတ်။ တွေ့ရတာက Viber Sticker Market က ကြောင်ကလေး ငိုနေတဲ့ပုံတွေ"။ ကြည့်ပြီးစိပ်ပူသွားလိုက်တာ တယောက်ယောက်များတခုခုဖြစ်သလား။ ဒါလဲ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ဒါမျိုးဆို ဖုံးဆက်မှာပေါ့။ လင်မယား၂ယောက် ခလေးလုပ်ပြီးများရန်ဖြစ်နေသလား။ တွေးလဲတွေး လက်ကလဲ ချက်ချင်းဖုံးလှမ်းခေါ်လိုက်မှ။
"ဟဲလို မာမီလား။ ဘာဖြစ်လို့တုန်း"x
"ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ လှတယ်မှတ်လား။ အဲဒါမနေ့က ရွှေနန်းတော်ကနေ ဝယ်ပေးတာ။ ထူးထူးဆန်းဆန်း"
"ဟယ် ဓာတ်ပုံရိုက်ပို့လိုက်တယ်လေ။ မရဘူးလား။ မွေးနဲ့အတွက်ဆိုပြီးဝယ်ပေးတာ။ မွေးနေ့ကဖြင့်ပြီးတာကြာလှပြီ။ အဲဒီဟာကို... ဒါပေမဲ့သိလား...မနေ့က ဗယ်လင်တိုင်းနေ့လေ.. အဲဒါ...xxxxxxxxxxxxx.......xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.."
အဖေက အိမ်ထောင်သက် အနှစ်သုံးဆယ်ကျော်မှာ မလုပ်စဖူး အလုပ်ထူးပြီး မွေးနေ့လက်ဆောင် အမည်ခံ ဗယ်လင်တိုင်းလက်ဆောင်ဝယ်ပေးလို့ အမေက မျက်ရေလည်အောင်လို့ဝမ်းသာတယ်လို့ပြောချင်တာကိုး။
ရွှပြည်ကြီးရဲ့ connectionနဲ့ ကြောင်လေးနဲ့တဆက်ထဲပို့ထဲတဲ့ပုံတွေကလဲ ဖုံးပြောနေတုံးမှပဲ တဒိုင်းဒိုင်းဝင်လာလို့ ကျမဇာတ်ရေမလည်ဖြစ်သွားတာကိုး။
နောင်နှစ်များကျမှ အဖေ့ကိုပြောရအုံးမယ်။ "လက်ဆောင်မပေးခင် ဟိုသီချင်းလေးအရင်ဆိုလို့"
"အဖွားကြီးမင်းက အဖိုးကြီးငါ့ကို မောင်တွေဘာတွေခေါ်ပါအုံး" လို့လေ။
"အမေနဲ့အဖေ နောင်၂ပေါင်းများစွာအထိ ဒီလိုပဲအမြဲပျော်ရွှင်ပါစေ"
Posted by Adora etc. at 20:23 No comments:
ဒီတခါတော့ ဆားချက်တယ်ပဲဆိုဆိုဘာပဲဆိုဆို နှစ်သက်မိတဲ့ မြန်မာဖက်ရှင်တွေ အင်တာနက်ပေါ်ကနေ စုစည်းထားသမျှတင်ပါရစေ။ Adora blogကိုလာလည်ကြတဲ့သူတွေတော်တော်များများက search engineကနေ မြန်မာဖက်ရှင်အကြောင်းရှာရင်း ရောက်လာကြတာသတိထားမိတာ တော်တော်ကြာပါပြီ။ တကယ်က ကျမ blogမှာ မြန်မာဝတ်စုံတွေအကြောင်းဘာမှ များများစားစားမရှိလှပါဘူး။ ဟိုးအရင်ကရေးထားတဲ့ Celebrating the Curves ထဲမှာ မြန်မာဝတ်စုံက ဝသော၊ပိန်သောမြန်မာမိန်းကလေးတိုင်းနဲ့လိုက်တဲ့အကြောင်း ရေးထားတာမှာ keyword နဲ့သွားတိုက်ဆိုင်နေတဲ့အတွက်ရောက်လာကြတာပါ။
ကျမက မြန်မာဝတ်စုံကိုအင်မတန်နှစ်သက်တဲ့ထဲမှာပါ ပါတယ်။ အဝေးမှာနေလို့ မြန်မာဝတ်စုံနေ့တိုင်းဝတ်ဖို့အဆင်မပြေလှပေမဲ့ ဘုန်းကြီးကြောင်းသွားတိုင်း၊ အလှူဖိတ်တိုင်း၊ မြန်မာမဂ်လာဆောင်သွားတိုင်း မြန်မာဝတ်စုံလေးတွေ ထုတ်ဝတ်ဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် တိုင်းရင်းသားရိုးရာချည်ထည်လေးတွေက အေးလဲအေး၊ အရောင်အသွေးစုံပြီး၊ ဈေးလဲအရမ်းမကြီးတဲ့အတွက် ထသွားထလာလဲ ဝတ်ပျော်ပါတယ်။ ရန်ကုန်ပြန်တိုင်းလဲ စမ်းချောင်းက ချုပ်နေကြအမဆီမှာ ၃-၄ထည် ပြန်ယူလာဖို့သွားချုပ်ဖြစ်တာပါပဲ။ ဒီတော့ ဘယ်ပိတ်စကို ဘယ်လိုပုံချုပ်မလဲစဉ်းစားရပြီလေ။ ကျမလုပ်လေ့ရှိတာကတော့ အင်တာနက်ပေါ်က အကျီပုံလေးတွေကြိုက်တာတွေ့သမျှ ဖုံးထဲမှာ၊ laptopထဲမှာ saveလုပ်ပြီးသိမ်းထားတာပါ။ ချုပ်ခါနီးကြတော့ ပြန်ကြည့်လိုက်ရုံပေါ့။ ကဲ အကြံမပိုင်လား။
အခုသိမ်းထားတဲ့ပုံလေးတွေထဲက အနှစ်သက်ဆုံးပုံလေးတွေကို ဝေမျှချင်ပါတယ်။ ဒီမှာတခုပြောချင်တာက ဒီ ပို့စစ် ထဲမှာရေးထားတဲ့ ဒီဇိုင်းတွေက အင်တာနက်ပေါ်ကနေ စုစည်းထားတာပါ။ ကျမမပိုင်ပါဘူး။ အခကြေးငွေယူပြီး ကြေငြာတာလဲမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီဇိုင်းနာတွေက သူတို့ဒီဇိုင်းတွေကို အင်တာနက်စာမျက်နှာကနေကြေငြာထားတဲ့ထဲကမှ ကိုယ်ကြိုက်တာလေးတွေ သိမ်းထားတာပါ။ သူတို့ ဒီဇိုင်းတွေထဲကအကောင်းဆုံး ဒီဇိုင်းတွေလို့လဲမဆိုလိုပါဘူး။ ကျမအရပ် နဲ့ ကျမ ကိုယ်လုံးနဲ့လိုက်မယ်ထင်တဲ့၊ လိုက်တဲ့ ပုံစံလေးတွေရွေးပြီး သိမ်းထားတာလေးတွေ ဝေမျှတာပါ။မြန်မာဝတ်စုံလှလှလေးတွေ (Adoraနဲ့ အကြိုက်တူမယ်ဆိုရင်ပေါ့လေ) ရှာနေတဲ့သူတွေအတွက်အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင် ကျေနပ်ပါတယ်။ ဓာတ်ပုံတွေကို ဖဘပေါ်ကအောက်ပါpageများမှကူးယူပါတယ်။
New Age Fashion Design
Shwe Kant Kaw Silk
Sweet & Smart Fashion
Posted by Adora etc. at 20:062comments:
၂၀၁၄ ဇန်နဝါရီလထဲဝင်လို့ ကုန်တောင်ကုန်တော့မှာဆိုတော့ နှုတ်ဆက်ဖို့နည်းနည်းတောင်နောက်ကြနေပြီပေါ့နော်။ကျမရဲ့ Blogမှာ ၂၀၁၄အတွက် ပထမဆုံးရေးတဲ့စာမို့လို့ "Happy New Year 2014" လို့အရင်ဆုံးနှုတ်ဆက်ချင်ပါတယ်။
ဒီဇင်ဘာလတုံးက ၃ပတ်ကျော်ကြာအောင် ရွှေပြည်ကြီးကိုပြန်သွားတာကြောင့် ကျမBlogကို ကိုယ်တိုင်မရောက်တာတောင် ကြာပါပြီလေ။ ကိုယ့်Blogကို မရောက်ပေမဲ့ ကြည့်နေကြ ကိုညီလင်းတို့၊ အမသက်တို့၊မလေး၊ မလေနုအေး နဲ့အမချစ်တို့ဆီတော့ သွားသွားချောင်းဖြစ်တယ်။ ကိုညီလင်း တယောက်လဲ မအားလို့နေမှာ၊ စာအသစ်မတွေ့တာ နဲနဲတောင်ကြာပြီ။ ဒီကြားထဲမှာ ကျမနှစ်သက်ရတဲ့ ttsweet စာပြန်ရေးလို့ ဝမ်းသာလိုက်တာ။
ဇန်နဝါရီလဆန်းကတဲက အခန်းထဲမှာဒီအတိုင်းပက်လက်ကြီးချပြီး မရှင်းဘဲထားတဲ့ ခရီးဆောင်အိတ်ကြီး ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကရှင်းအပြီးမှပဲ အေးအေးလူလူ စာတွေရှင်း၊ emailတွေဖတ်၊ပြန်၊ youtubeမှာ subscribe လုပ်ထားတဲ့ channelsတွေက သီချင်းအသစ်တွေ program,segment အသစ်တွေကိုလိုက်ကြည့်ရင်း michelle phan ရဲ့ 2014 new year resolution ဆိုတဲ့ video အတိုလေးကို ကြည့်ဖြစ်ပါတယ်။
michelle phan ဆိုတာ ဗီယက်နမ်လူမျိုး၊ အမေရိကားမှာအခြေချနေထိုင်သူ၊ မိတ်ကပ်ပြင်နည်းတွေကို သူမရဲ့ youtube channelကနေတဆင့် ရှင်းလင်း သင်ပြရာကနေ နာမည်ကြီးလာပြီး အခုဆို em ဆိုတဲ့ မိတ်ကပ်လိုင်းတခုကိုတောင် ပိုင်ဆိုင်နေပါပြီ။ michelle phan ရဲ့video တွေကအများအားဖြင့် နောက်ခံသီချင်းအေးအေးလေးတွေနဲ့ မိတ်ကပ်ပြင်နည်းအဆင့်ဆင့်ကို လှလှပပချစ်စရာကောင်းအောင်ရိုက်ပြထားတာများပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီ2014 new year resolution videoလေးမှာ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းမိတ်ကပ်လေးနဲ့ သူ့အိပ်ခန်းလိုနေရာမျိုးလေးမှာထိုင်ပြီး သူမရဲ့ new year resolutionတွေကို တခုချင်းထိုင်ရှင်းပြနေတာကြည့်ရင်း ကျမရဲ့ new year resolutionကို စဉ်းစားမိပါတယ်။
(၁) ပထမဦးဆုံးတခုက လက်ရှိအချိန်၊ လက်ရှိပတ်ဝင်းကျင်၊ လက်ရှိရောက်နေတဲ့နေရာလေးကို စိတ်ရောကိုယ်ပါ တန်ဖိုးထားပြီး Enjoy လုပ်ဖို့ပါ။ Adora တို့တွေတနေ့တနေ့ ပြီးသွားတဲ့အတိတ်နဲ့ ဖြစ်မလာသေးတဲ့ အနာဂတ်အကြောင်းတွေးပြီး ပျော်လိုက်ကြ၊ စိတ်လှုပ်ရှားလိုက်ကြ၊ ဝမ်းနည်းကြ၊ စိတ်ပူကြနဲ့ ကိုယ်အခုပိုင်ဆိုင်နေတဲ့ လက်ရှိအချိန်လေးကိုမေ့နေတတ်ကြတာလေ။ လက်ရှိသွားရင်းလာရင်း၊ စားရင်းသောက်ရင်းတောင် မြင်နေတွေ့နေ စားနေရတာတွေကို လူကိုယ်တိုင်မခံစားတော့ဘဲ ဒစ်ဂျစ်တယ်ဖုံးတွေ၊ ကင်မရာ Filterနဲ့ social media sites တွေကနေပဲ ခံစားကြ၊ နှစ်သက်တဲ့အကြောင်းကို Like button နဲ့ပဲစကားပြောကြတော့တာ။ မျက်လုံးက မြင်ကွင်းကျယ်ကြီးကို တမေ့တမောခံစားလို့ရပါလျှက်နဲ့ ထောင့်မှန်စတုဂံအကွက်လေးတွေကပဲ ကြည့်နေကြတော့တာ။ ကျမကတော့ ၂၀၁၄မှာ ဒီအကျင့်တွေကို တတ်နိုင်သလောက်ဖျောက်ပြီး လက်ရှိအချိန်၊လက်ရှိပတ်ဝင်းကျင်လေးကို စိတ်ရောကိုယ်ပါနှစ်ပြီး ခံစားဖို့ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်။
(၂) Get Organized - ကျမ ကအင်မတန် စည်းနစ်မကျတဲ့လူအမျိုးအစားထဲမှာပါ ပါတယ်။ ဘယ်အရာကိုမှ မှတ်မှတ်သားသားမထားသိုတတ်၊ မိန်းကလေးမို့ သပ်သပ်ရပ်ရပ် သိမ်းသိမ်းထုတ်ထုတ် မနေတတ်၊ စိတ်ပါရင် တနေကုန် မရပ်မနား ရှင်းလင်းသိမ်းဆည်းဖို့ ဝင်မလေးပေမဲ့ နေ့တိုင်းတော့ ဘယ်တော့မှမလုပ်၊ ဒါတွေကြောင့်လဲ ဟိုပစ္စည်းရှာမတွေ့၊ ဒီပစ္စည်းဘယ်နားမှန်းမသိ ဆိုတာမျိုးခဏခဏဖြစ်တတ်တာမျိုး။ ဒါတောင် စည်းစနစ်ကြီးပြီး မိန်းမအရမ်းပီသတဲ့ မေမေ့လက်ပေါ်မှာကြီးလာတာ။ ဒီနှစ်သစ်မှာတော့ ဒီအကျင့်ဆိုးလေးတွေပြင်ဖို့ကြိုးစားပါမယ်။
(၃) Truely take care of myself - ကိုယ့်ကျန်းမာရေးနဲ့ စိတ်ချမ်းသာရေးကိုဂရုစိုက်ရန်။
(၄) Still motivated - ရုံးကအထက်လူကြီးက မလေးရှားနိုင်ငံသားတရုတ်လူမျိုးပါ။ အလုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဗဟုသုတပြည့်ဝပြီးတော်ပေမဲ့လည်း လက်အောက်ငယ်သားအပေါ်မမောက်မာတက်သူ၊ စကားပြောချိုသာယဉ်ကျေးတဲ့သူမျိုး ဆိုတော့ သူကောင်းတာကို အခွင့်ကောင်းတတ်တဲ့ သူမျိုးကလဲမရှားဘူးဆိုပါတော့။ ကျမ ကတော့ အလုပ်ရှိရင်အချိန်ကုန်မြန်တယ်ဆိုပြီး မရှိရှိတာရှာလုပ်၊ အလုပ်ကို အချိန်တိုအတွင်းမြန်မြန်ပြီးအောင်လုပ်၊ ရီပို့တွေ ကောင်းကောင်းလုပ်ပြီးထပ်ဆိုတော့ Quarterly Assessment မှာသူက "မင်းက ဒီဌာနမှာအသစ်ပေမဲ့ မသိတာကိုမေး၊ အလုပ်အပေါ်မှာ စေတနာထားပြီး မြန်မြန်အဖြေထွက်အောင်လုပ်၊ အစပိုင်း ခဏပဲငါguideလုပ်ရပြီး အချိန်တိုတိုလေးအတွင်းမှာ ကျွမ်းကျင်လာတာ ငါတောင်အံ့ဩယူရတယ်" တဲ့။ ဒီလိုလေးအမြဲချီးကျူးခံရဖို့ ဆက်ပြီးကြိုးစားမယ်။
(၅) Give more but expect less - ၂၀၁၃ကစိတ်မချမ်းသာစရာဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ ကိစ္စတွေကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင် ကိုယ်မျှော်လင့်ထားတဲ့အတိုင်း ဖြစ်မလာခဲ့လို့သာ ကိုယ့်မှာစိတ်ဆင်းရဲရတယ်လို့ သုံးသပ်မိတယ်။ လူတကိုယ်စိတ်တမျိုးမို့ ကိုယ်တန်ဖိုးထားတဲ့အရာတွေက တပါးသူအတွက်အရေးမပါတာဖြစ်နိုင်သလို၊ သူဖြစ်ချင်တဲ့အရာတိုင်းက ကိုယ့်အတွက်ဘာမှမဟုတ်တာလဲ ဖြစ်နိုင်တာပဲလေ။ဒီတော့ ဘယ်အရာကိုမဆိုကိုယ့်ဘက်ကအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပြီး ဘာမှပြန်ပြီး မျှော်လင့်ချက်မထားတာအကောင်းဆုံးနဲ့ စိတ်အသက်သာဆုံးနေထိုင်နည်းတမျိုးပါပဲ။
(၆) Focus - ကျမက ရည်မှန်းချက်ကြီးတဲ့သူ။ ရည်မှန်းချက်ကြီးသော်လဲ အာရုံတွေများတတ်သူပါ။ အလုပ်တခုကိုအာရုံစိုက်နေတုန်း၊ တခြားဟာတခုကိုလဲ သွားလုပ်လိုက်ချင်တာမျိုး။ အပြိုင်အဆိုင်တွေများတဲ့ ဒီခေတ်ကြီးမှာ Multi Tasking လုပ်နိုင်တာကကောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့လဲ တခါတရံမှာအာရုံတွေပျံ့လွန်းတာဟာ လက်ရှိလုပ်နေတဲ့ အရေးကြီးကိစ္စတချို့ကို အာရုံစူးစိုက်မှုနည်းသွားစေတာ မကောင်းပါဘူး။ ဒါကိုလဲ ပြင်ရပါမယ်။
(၇) ဒီဇင်ဘာလကရန်ကုန်ပြန်တဲ့အခါ ၁၀တန်းတုန်းကစာသင်ပေးခဲ့တဲ့ အလွန်ချစ်ရတဲ့ ဆရာနဲ့ဆရာမကိုသွားတွေ့ပြီး ကန်တော့ဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ပေါင်း၁၀နှစ်ကျော်ကြာခဲ့ပေမဲ့ ဆရာရော၊ ဆရာမရော တစက်ကလေးမှ ရုပ်မကြသွားတဲ့အပြင် မျက်နှာတွေများ ကြည်လို့ရှင်းလို့။ ညဉ့်နက်တဲ့အထိ အချိန်အတော်ကြာအောင်စကားထိုင်ပြောပြီး ရင်ထဲမှာအေးချမ်းလိုက်တာ။ဒီမှာသတိထားမိတာက ဆရာရော၊ ဆရာမရော ဘုရား၊တရားရိုသေကိုင်းရှိုင်းပြီး သီလ၊သမ္မာဓိနဲ့ပြည့်စုံကြလို့ဒီလိုမျိုးစိတ်ရောကိုယ်ပါ ကျန်းမာချမ်းသာနေကြတာပါ။ ဆရာတွေရဲ့ အိမ်ကနေပြန်လာတော့ "ငါများ ဘာသာရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘာများလုပ်ဖြစ်သလဲ" လို့ပြန်တွေးတဲ့အခါ လစဉ်ပုံမှန် အလှူထည့်ဖြစ်တာကလွဲလို့ ဘာမှဟုတ်တိပတ်တိ မလုပ်ဖြစ်ပါဘူး။ လိုချင်တာတခုခုရှိတဲ့အခါ ဘုရားကိုကုန်းရုန်းရှိခိုးတတ်တဲ့အကျင့်ဆိုးကြီးကလဲ ငယ်ငယ်ကအတိုင်း မပျောက်သေးပါဘူး။ ဒီနှစ်သစ်ကစလို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ကောင်းတယောက်ဖြစ်ဖို့တတ်နိုင်သလောက်ကြိုးစားချင်ပါတယ်။
(၈) Save More , Spend Less - ဒါကတော့ နှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းကိုယ့်ဘာကိုပြောတဲ့စကားပါ။တချို့လတွေမှာ လကုန်ခါနည်းတိုင်းပြောဖြစ်ပါတယ်။ ခုထိတော့ သိပ်မအောင်မြင်သေးပါဘူး။
(၉) To pursue own hobbies and taking up courses သူများတွေအတွက်တော့ မပြောတတ်ပါဘူး။ Adora ကတော့တခါတလေ ကိုယ့်ဘဝကိုကိုယ်ငြီးငွေ့ပါတယ်။ တနေ့အနေ့ရုံးနဲ့အိမ်၊ shopping mall နဲ့စားသောက်ဆိုင် ဒီသံသရာကကိုမထွက်ဘူး။ စိတ်ပြေလက်ပျောက် ခဏခဏးD ခရီးတွေထွက်တဲ့အခါ အပေါ်မှာရေးထားတဲ့ new year resolution နံပတ်၈နဲ့မကိုက်တော့ပြန်ပါဘူး။ ဒီနှစ်တော့ စိတ်လဲအပန်းပြေ၊ ပညာအသစ်လဲတိုး၊ ကိုယ်လဲဝါသနာပါတဲ့ Baking ဒါမှမဟုတ် musical instrument တခုခုသင်မလားစဉ်းစားနေပါတယ်။
တွေးကောင်းကောင်းနဲ့ တွေးပြီးရေးလိုက်တာ ၉ခုတောင်မှထွက်လာပါတယ်။ များနေပေမဲ့ တကယ်လိုအပ်တဲ့အချက်တွေမို့ လုပ်ဖြစ်အောင်လိုက်လုပ်ဖို့ကြိုးစားပါမယ်။ အားလုံးပဲ နှစ်သစ်မှာပျော်ရွှင်ပါစေ။
Posted by Adora etc. at 20:15 No comments:
"အမှတ်တရ" လို့ပြောလိုက်ရင် သူများတွေအဖို့တော့ မသိဘူး။ ကျမ ပြေးပြီးမြင်မိတာ ဆရာမဂျူးရဲ့ ပထမဆုံးလုံးချင်းစာအုပ်လေးပါပဲ။ ၁၉၈၇လောက်က ထ...
ပီနန်ကျွန်းက Peranakan Mansion
လွန်ခဲ့တဲ့လက မလေးရှားနိုင်ငံ ပီနန်ကျွန်းကို အလုပ်က လွှတ်တာနဲ့ခဏရောက်ခဲ့ပါတယ်။ရောက်ရောက်ချင်း လေယာဉ်ပေါ်ကဆင်း တာနဲ့ အထုပ်ကို ဟိုတယ်ပေါ်မှာဝင်...
မတ်လလည်လောက်ကစပြီး သူမ အိမ်အသစ်ပြောင်းနေရတယ်။ အိမ်ဝယ်ဖို့အခွင့်မသာသေးသရွေ့အိ မ်ပြောင်းရ၊ ရွှေ့ရ လုပ်ရတာတွေက သိပ်တော့မထူးဆန်း။ ဒီတခေါက် ပြော...
ခရီးသွားနောက်ဆက်တွဲနဲ့ BPP Challenge
စာရေးချင်နေတုန်း အမ စုချစ်သူ က BPP Challenge မှာတတ် လာတဲ့အတွက် အတော်ဖြစ်သွားပါတယ်။ ခရီးကပြန်ရောက်ရောက်ချင်းဆိုတော့ခရီးနဲ့ ပတ်သက်တာတွေပဲ ရေြး...
ပီနန်ကျွန်းက Peranakan Mansion II
Peranakan Baba Nyonyas ဆိုရင် အရင်ကတရုတ်လူမျိုးနဲ့မလေးလူမျိူးပေါင်းစပ်ရာကဖြစ်လာတယ်လို့ ထင်ခဲ့တာ တကယ်က အင်ဒိုနီးရှားနဲ့ ပင်နီဆူလာမလေးရှား ဘ...